မိုဘိုင်းစျေးကွက် - ဤနည်းဗျူဟာ ၅ ချက်ဖြင့်သင်၏ရောင်းအားကိုမြှင့်တင်ပါ Martech Zone
ယခုနှစ်အကုန်တွင်၊ အမေရိကန်လူကြီး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ကြလိမ့်မည်. မိုဘိုင်းပစ္စည်းများ B2B နှင့် B2C ရှုခင်းများကိုလွှမ်းမိုးထားသည် နှင့်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကိုစျေးကွက်လွှမ်းမိုး။ ငါတို့ပြုသမျှမှာမိုဘိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာများတွင်ထည့်သွင်းရမည်။
Mobile Marketing ဆိုတာဘာလဲ
မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုသည်မှာစမတ်ဖုန်းကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတွေးအခေါ်များကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ဖောက်သည်များအားအချိန်နှင့်တည်နေရာကိုထိခိုက်လွယ်သော၊
မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာတွင်စာတိုပေးပို့ခြင်း (စာတို), မိုဘိုင်း browsing, မိုဘိုင်းအီးမေးလ်, မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှု, မိုဘိုင်းကြော်ငြာ, မိုဘိုင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး, ကိုကလစ်နှိပ်ပါရန်ခေါ်နည်းပညာများနှင့်မိုဘိုင်း applications များ။ လူမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရှုခင်းကိုလွှမ်းမိုးသည်။
မင်းအကဲဖြတ်မခံရဘူးဆိုရင် မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး မဟာဗျူဟာများ၊ Eliv8 သည်သင်၏ရိုးရှင်းသောနှင့်အစွမ်းထက်သောအချက်အလက်များကိုသင်၏မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ရောင်းချနိုင်သည်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ခေါ်ဆိုမှုကိုရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပါ - ကလစ်နှိပ်ရန်ပလီကေးရှင်းမှ optimized လင့်များကိုခေါ်ပါ.
Check-In ကမ်းလှမ်းချက်များ Yelp, Facebook, Foursquare (Swarm) ကို အသုံးပြု၍ သင်၏လက်လီတည်နေရာအပေါ်သစ္စာရှိသူများအတွက်ကမ်းလှမ်းချက်များကိုပေါင်းစပ်ရန်အသုံးပြုပါ။
စာသားနှင့် SMS စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး - ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက်ထိရောက်သောအရာမရှိပါ။ သင်၏ SMS ဗျူဟာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်သည့်အခါအီးမေးလ်ထက် ၈ ဆပိုထိပါသည်။
မိုဘိုင်း Inbox - အီးမေးလ်အားလုံး၏ထက်ဝက်ကျော်ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်တွင်ဖတ်ပြီး (ဖျက်ပစ်သည်) ။ သင်၏အာမခံချက် အီးမေးလ်များသည်မိုဘိုင်းဖုန်းများအားတုံ့ပြန်မှုရှိကြသည် ထုတ်ကုန်များသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
မိုဘိုင်း - ပထမဆုံး - မိုဘိုင်း၏ပထမဆုံးမဟာဗျူဟာကိုလက်ခံပါ။ လူအားလုံး၏ထက်ဝက်နီးပါးသည်မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်အလုပ်မလုပ်ပါကသင့်ဆိုဒ်သို့ပြန်သွားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
Tags: စစ်ဆေး-in ကိုဖုန်းဆက်ဖို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါfacebook ကိုဒေသခံစတုရန်းလေးထောင့hyperlink ဖုန်းနံပါတ်ပထမ ဦး ဆုံးမိုဘိုင်းမိုဘိုင်း inboxမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာလက်ကိုင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများမိုဘိုင်းတုံ့ပြန်မှုအီးမေးလ်ပျံYelp